भारतमा संक्रमण, नेपालमा झस्को- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भारतमा संक्रमण, नेपालमा झस्को
कोभिडविरूद्धको खोप अभियान सुस्त
पहिलो मात्रा खोपसमेत नपाउनेको संख्या ७२ लाख
संक्रमण बढ्न सक्ने र १२ वर्षमुनिका बालबालिका जोखिममा पर्ने विज्ञहरुको चेतावनी
वैशाख ६, २०७९ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिड संक्रमण दर उच्च गतिमा बढेसँगै नेपालमा फेरि झस्को पसेको छ । सम्भावित लहर र जोखिमबाट बच्न कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, खोपप्रतिको सुस्तताका कारण जोखिम पुनः भित्रिन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अझैसम्म नेपालमा एक चौथाइले कोभिडविरुद्घ कुनै पनि खोप लिएका छैनन् । पूर्ण खोप लिएको धेरै समय भएका व्यक्तिले पनि प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न अतिरिक्त खोप लिन विज्ञहरूको सुझाव छ ।
दिनहुँ लगाइने खोपको संख्यामा समेत पछिल्ला दिन कमी देखिएको छ । वैशाख १ यताका पाँच दिनमा दिनहुँ सरदर २५ हजार गरी १ लाख २६ हजार ३ सय ४४ जनाले खोप लिएका छन् । सोमबारसम्म जनसंख्याको ७५.९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २१ लाख ५६ हजार १ सय ३१ जनाले एक मात्रा र ६६.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३८ लाख २ हजार १ सय ७६ जनाले पूर्ण खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त खोप लगाउनेहरू जनसंख्याको ८.२६ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख १३ हजार ५ सय ३२ जना मात्र छन् ।
राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिका सदस्य डा. जीडी ठाकुर हाल करिब ७२ लाख नेपालीले एक मात्रा खोपसमेत नपाएको बताउँछन् । ‘खोप नलगाएकाहरूमा कोभिड संक्रमण गम्भीर हुने र मृत्युको सम्भावनासमेत रहने देखिसकिएकाले तुरुन्त सबै जनालाई खोप सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मुलुकमा १२ वर्षमाथिकालाई खोप उपलब्ध छ । १२ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या ३४ लाख २५ हजार ४ सय ८ रहेकामा ९० प्रतिशतले एक मात्रा र ७६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लिएका छन् । यस्तै, १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका उमेरको जनसंख्या १ करोड ९९ लाख २२ हजार १ सय ६४ रहेकामा ९४ प्रतिशतले एक मात्रा र ८३.२ प्रतिशतले पूर्ण खोप लिएको सरकारी तथ्यांक छ । ११ वर्ष र त्योभन्दा मुनिका बालबालिकाले भने अझैसम्म खोप पाएका छैनन् । सरकारले ५ देखि ११ वर्षका करिब ३५ लाखका लागि खोप ल्याउने निर्णय गरिसके पनि आउने टुंगो छैन ।
जसका कारण चौथो लहर सुरु भएको खण्डमा १२ वर्षमुनिका बालबालिका संक्रमणको बढी जोखिममा पर्ने खतरा रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
भारतमा बढ्दो संक्रमण दरबाट आफूहरू चिन्तित भइरहेको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल बताए । ‘अब सीमामा पहिले जस्तै स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भारतमा देखिएका नयाँ संक्रमितमा स्वास्थ्य गम्भीरता छैन कि भन्ने देखिन्छ ।’ सोमबार ३ हजार ६ सय नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ०.२५ प्रतिशत अर्थात् ९ जनामा संक्रमण देखियो भने १ हजार ९१ नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ जना अर्थात् ०.०९ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ । हाल नेफालमा सक्रिय संत्रमितको संख्या ३ सय ५० रहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दास भन्छन्, ‘हालसम्म संक्रमणको अवस्था समान्य छ । सीमा र विमानस्थलमा सोमबारको परीक्षणमा समेत शून्य संक्रमण देखिन्छ ।’
हालसम्म नेपालमा कोभिडको ‘एक्स ई’ लगायतका नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार ‘एक्स ई’ भेरिएन्ट सुरुमा महाराष्ट्रमा र पछि दिल्लीमा देखिएको थियो । ‘भारतमा देखिएको ‘एक्स ई’ नेपाल पनि आइसकेको होला, हामीले पहिचान मात्र नगरेको हो,’ उनले भने । हाल कोभिड सुषुप्त अवस्थामा देखिए पनि जुनमा चौथो लहर वा पुनः संक्रमण वृद्घि हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी विशेष रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलका उपनिर्देशक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्ज्वल श्रेष्ठले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड भाइरसको विकास जारी छ । नयाँ ‘एक्स ई’ भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले बेलायतमा १९ जनवरीमा पाइएको थियो । यसलाई दुई ओमिक्रोनको ‘सब भेरिएन्ट’, ‘बीए. १’, र ‘बीए. २’ को हाइब्रिड स्ट्रेन भनिएको छ । ‘बीए. २’ को दाँजोमा ‘एक्स ई’ भेरिएन्टको प्रसारदर १० प्रतिशत बढी रहेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०६:३१
बालबालिकालाई खोपमा अझै अन्योल
सरकारले मार्चभित्रै फाइजर खोप लगाउने निर्णय गरे पनि खोप भित्रिने मिति अझै अनिश्चित
वैशाख ३, २०७९ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — ५–११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले अझै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । सरकारले मार्च महिनाभित्रै खोप लगाइसक्ने घोषणा गरे पनि अझैसम्म कहिलेबाट अभियान सुरु हुन्छ निश्चित भएको छैन ।
सरकारले बालबालिकाका लागि आउने भनिएको फाइजर कम्पनीको खोप ५–११ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनअघि नै खोप भित्र्याएर लगाइसक्ने सरकारको तयारी रहे पनि विश्वभर अत्यधिक माग रहेकाले फाइजर कम्पनीबाट खोप प्राप्त हुने समय अझै यकिन भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसअनुसार ५–११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्घको खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘जसअनुसार मन्त्रालय फाइजर खोप ल्याउन सक्रिय भएर लागेको छ ।’
मुलुकभर ५–११ वर्ष उमेर समूहका करिब ३५ लाख बालबालिका छन् । उक्त जनसंख्यालाई खोपको प्राथमिक मात्रा (२ मात्रा) र खेर जान सक्नेसमेत आकलन गर्दा ८४ लाख मात्रा खोप आवश्यक रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले जनाएको छ । अभियानका लागि अन्य सबै तयारी भने भइसकेको शाखाले जनाएको छ । ‘बालबालिकालाई खोप लगाउन हामी तयार छौं,’ शाखा प्रमुख सागर दाहालले भने, ‘फाइजर खोप लगाउने प्रक्रियाबारे देशभर स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइसकिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने असारसम्म खोप लगाएर सक्ने योजनामा सरकार रहेको जनाएको छ । ‘उक्त परिमाणको खोप कम्तीमा साताको फरकमा ४ पटक गरी मुलुक भित्र्याउने प्रारम्भिक योजना छ,’ स्रोतले भन्यो ।
खोप भित्रिएको एकदेखि डेढ साताभित्रै लगाइसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रमुख दाहाल दाबी गर्छन् । तर, नेपालमा हाल अति न्यून तापक्रममा १५ लाख मात्रा खोप मात्रै भण्डारण गर्न सकिने क्षमता छ । खोप उत्पादन मितिदेखि ६ महिनासम्म माइनस ९०–६० डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्नुपर्छ । २–८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ‘अन–डाइल्युटेड’ अर्थात् उपयोग गर्न पातलो नबनाइएको अवस्थामा १० सातासम्म राख्न सकिन्छ । उपयोग गर्ने हकमा भने २५ डिग्री सेल्सियसमा करिब १२ घण्टासम्म राख्न सकिन्छ । क्लिनिकल ट्रायलअनुसार यो खोप ५–११ वर्षसम्मका बालबालिकामा दोस्रो मात्रा लिएको एक सातापछि ९०.७ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको कम्पनीको दाबी छ ।
हाल नेपालमा १२ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याका लागि मात्र कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध छ । हालसम्म १२–१७ वर्षसम्मका बालबालिकाका हकमा ९२ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ४५ हजार ४ सय ५१ जनालाई पहिलो मात्रा र ७५ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ८४ हजार ३ सय २६ जनालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइएको छ ।
शुक्रबारसम्म मुलुकभर खोप लगाउन योग्य संख्याको ६६.३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९३ लाख ६२ हजार ३ सय ६१ जनाले पूर्ण खोप पाइसकेका छन् । २ करोड २१ लाख ४६ हजार ४ सय ८६ जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ७५.९ प्रतिशत हो । हालसम्म ४ करोड ५ लाख ८५ हजार ५ सय ५७ मात्रा खोप खपत भइसकेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७९ ०६:२४